Sahan: Dadka Faransiiska ah oo doonaya inay ka caawiyaan Afrika - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Fadlan: Dadka Faransiisku rabaan in ay ka caawiyaan Afrika - JeuneAfrique.com
Sahan: Dadka Faransiiska ah oo doonaya inay ka caawiyaan Afrika - JeuneAfrique.com
XCHARX Les Français se font plus généreux, si l’on en croit le sondage réalisé en février 2019 par l’institut CSA pour l’Agence française de développement (AFD) auprès d’un échantillon national représentatif de la population française de 15 ans et plus.
79% jawaabeyaasha ayaa sheegaya in ay taageeraan dalalka soo koraya, oo ah toban dhibcood oo ka sareeya sannadkii hore; saamigaan wuxuu u kordhay 84% carruurta ka hooseysa 25. 55% jawaabaha waxay doonayaan in Faransiisku ay mudnaanta siinayaan Afrika iyo gaar ahaan Afrika.
Sahankani wuxuu ka hor imanayaa falanqaynta muujinaya Faransiiska ee a jahwareerka ka soo noqoshada ama xitaa cadaadiska xagga socdaalka. Si ka fiican, waxay muujinaysaa kor u kac weyn (+ 17%) ee dhadhanka Faransiiska ee taageerada horumarinta joogtada ah ee waddamada saboolka ah. "Waxay noqon kartaa saameynta COP 21 ee Paris kaas oo ku caan baxay mawduucan, "ayuu yiri Rémy Rioux, Agaasimaha Guud ee AFD intii lagu jiray soo bandhigidda natiijooyinka 2018 ee Hay'adda.
Mashruucyada 840 oo ay bilaabeen AFD ee 2018
Wuxuu sidoo kale soo dhaweeyay xaqiiqda ah in ballanqaadka maaliyadeed (deymaha, deeqaha, deeqaha iyo dammaanadaha) ay gaareen bilyan Million, kororka marka loo eego 2017 iyo in ka badan 40% saddex sano. "Waxaan ku soconnaa waddada uu madaxweynaha Jamhuuriyadda ku soo rogayo maalgelinta horumarinta Faransiiska ee 0,38% ee waxsoosaarka guud ee qaranka (GNP) ilaa 0,55%, 2022" ayuu ku dhawaaqay.
Mashruuc cusub oo 840 ah ayaa la bilaabay 2018, taas oo ah 94 ka badan sanad hore. Qeyb ka mid ah ballanqaadyada waxay u socdeen Afrika. Qaybaha ugu muhiimsan waa waxbarashada, caafimaadka iyo sinnaanta jinsiga. Intaa waxaa dheer, maadaama ay abuurtay shaqo abuuris ay kicinayso kobaca ganacsiga gaarka loo leeyahay, AFD waydiisatay ee ku yaala Proparco subsidiary inay "kor u qaadaan taageeradooda ganacsi iyo hal-abuurka".
7 ayaa bartilmaameedsanaya bilyan euro oo Afrika ah oo ku yaal 2019
By 2022, 2,5 bilyan euro ayaa loo qoondeeyey in ay taageerto shirkadaha yaryar ee 10 000 bilawga Afrika. STOA, oo ah wadashaqeyn lala yeeshay Caisse des Dépôts et Consignations oo ku takhasusay maalgalinta kaabayaasha, ayaa ka qaybqaatay furitaanka dabaysha Hindiya iyo biyo-dhaan koronto ee Cameroon.
Guud ahaan, Group AFD ah ayaa ku lug lahaa mashaariicda ee gabdhaha 2018 463 000 dugsiga, wanaajinta helidda 14 caafimaadka milyan oo qof, bixinayo biyo la cabbi dadka 826 000 iyo korontada 7 milyan oo qof, ay ilaaliyaan ama soo celin 50 000 km2 goobaha dabiiciga ah iyo taageero 60 000 SMEs.
Hadafka 2019 waa in la keeno qaddarka Wakaaladda ee ku baxday 14 bilyan euros, kalabar taas oo had iyo jeer tagta Afrika, ilaalinta cimilada iyo sinnaanta jinsiga.
Ernestin Matjabo, sawir gacmeed oo ganacsade ah oo diiradda saara barashada internetka
Laba nin ayaa looga digay inayan korsanin, laakiin ma aysan dhegeysan - marna mar dambe isku mid ma noqon doonaan - SANTE PLUS MAG
TIPS: 22 LABAAD NOOCA WAX KA BEDELAYO IN AAD KA CODSANAY IN LIISKA XIDHIIDHKA
Pornhub, Xnxx iyo Xvideos: UK waxay u baahan tahay xaqiijinta da'da si loo helo
T-Mobile iyo Comcast oo hadda wada shaqeynaya si loola dagaallamo wicitaanada tooska ah - BGR
Faahfaahinta adeegga Kanye West Easter Axadda ayaa shaaca ka qaaday - dadka
DADKA & LIFESTYLE3,086
DIB U EEGID AFRICAN PRESS19